अपडेट : दुर्घटनामा परेका मेयरसहित ७ जनाको उपचार हुँदै
रुकुम, ४ वैशाख– चौरजहारी नगरपालिका–५ मा भएको सडक दुर्घटनामा परी ७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको चौरजहारीस्थित मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते हुनेमा चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख विशाल शर्मा, लेखापाल लोकेन्द्र परियार रहेका छन् । यसैगरी घाइते हुनेमा वडा नं.२ का पार्वती न्यौपाने, वडा नं. ३ का तेजवहादुर वटाला, वडा नं. ५ का भरत शर्मा रहेका छन् ।
विद्यार्थीको पोशाक वितरणका लागि जाँदै गर्दा नगरपालिकाको भे १ ज २४३ नम्बरको जिप चौरजहारी नपा वडा नं. ४ को मेलैनाउलीमा दुर्घटनामा परेको हो । घाइतेहरुको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ ।